Nhau - 2020 Global Baby Stroller uye Stroller Musika Kuongorora, Rudzi, Kunyorera, Forecast uye COVID-19 Impact Kuongorora 2025
Iyo yepasirese mucheche stroller uye stroller musika mu2020, yakatyorwa nemugadziri, dunhu, mhando uye mashandisiro, inofanotaura yakanakisa kongiri mhedzisiro, nzira dzekubatanidza uye tekinoroji yazvino mu2025. Chirevo chinoratidza uye chinotsanangura chikamu chega chega chemusika kuti uongorore zvigadzirwa zvine musoro, izvo zvinogona gadza nhungamiro yekukura kwenzvimbo yepasirese yecheche stroller nemusika wevatyairi. Chirevo chakaitisa ongororo yakawandisa yeiyo mamiriro emusika uye yakaongorora zvikamu zvakasiyana zvemusika nezvikamu zvidiki zveindasitiri. Nerubatsiro rwemushumo uyu, vaverengi vachakwanisa kuita mutongo wekupedzisira pane zvingangoitika mhedzisiro yezvinhu zvataurwa pamusoro, izvo zviri kukonzera kukura kunoramba kuripo pamusika wepasi rose. Nerugwaro urwu rwekutsvagisa, zvichave nyore kumisikidza uye kukwidziridza nhanho yega yega yeindasitiri maitiro kusanganisira kutora chikamu, kutora, kuzvidzora uye kuita mari.
Chirevo chinoparadzanisa mutyairi wepasirese uye mushamba wevatyairi muzvikamu zvakati wandei zvemusika zvinoenderana nehunhu, mabasa, mashandisirwo uye mhando. Ruzivo urwu rwunobatsira vatsva vanopinda uye vatambi vachiri kusimukira kuti vanzwisise mamiriro ese emusika uye vawane ruzivo nezve akasiyana zvigadzirwa uye masevhisi anowanikwa mumusika. Chirevo ichi chine ruzivo rwakadzama pamusoro pezvikamu zvakakosha zvemusika zvinogona kutungamira kana kutyaira iwo musika wese panguva yekufungidzira kubva 2020 kusvika 2025. Chirevo ichi chinofukidza kuputsika kwenzvimbo yemusika. Hapana mubvunzo kuti makambani anovimba zvakanyanya nezvikamu zvakasiyana zvemusika zvakafukidzwa nemishumo yekutsvaga mumusika, saka gwaro iri rinovapa ruzivo rwakanakisa kutyaira kambani munzira kwayo. Zvakajairika hunhu zvinotarisirwawo kuita segmentation, senge chikamu chemusika wepasirese, zvido zvakajairika, kudiwa kwepasirese, uye kugoverwa kwevaya vanofamba-famba nevano famba.
Ongorora: Chirevo chedu chinotarisa kumatambudziko makuru nenjodzi idzo makambani angangosangana nadzo nekuda kweasati amboitika COVID-19 kubuda.
Vakuru vatambi vanoshanda mune yepasirese stroller uye stroller musika: Goodbaby, Mybaby, Artsana, Combi, BBH, Seebaby, Emmaljunga, Shenma Group, Newell Rubbermaid, Aing, Dorel, UPPAbaby, ABC Dhizaini, Hauck, Stokke, Peg Perego, Roadmate
Yakakamurwa musika nerudzi, zvigadzirwa zvinogona kukamurwa kuita: single stroller, akawanda strollers, strollers
Musika wakakamurwa nechishandiso wakakamurwa kuita: pasi pegore rimwe, 1 kusvika 2.5 makore, uye anopfuura makore 2.5 makore
Zvinoenderana nechikamu chematunhu, musika wakakamurwa kuita matunhu makuru anotevera: North America (United States, Canada neMexico), Europe (Germany, France, United Kingdom, Russia neItari) Asia Asia (China, Japan, South Korea, India, uye Southeast Asia), South America (Brazil, Argentina, nezvimwewo), Middle East ne Africa (Saudi Arabia, Egypt, Nigeria neSouth Africa)